18 / 05 / 2021 18 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 384 Views စာ0မှတ်ချက် 18 +, 2002, 4855 Spider-Manရထားကယ်ဆယ်ရေး, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဘက်တီ Brant, ဇါတျရှငျဇါတျလိုကျ, ဆရာဝန် Octopus, ရုပ်ရှင်, အစိမ်းရောင် Goblin, ဂျေယောန Jameson, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Movie,, ပတေရုသက Parker, PlayStation, က Playstation 4, Spider-Man, အဆိပ်, ဗွီဒီယိုဂိမ်း
ဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်အတူ Marvel ရုပ်ပြစာအုပ်များ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ရုပ်ရှင်များပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်သမိုင်းမှဆွဲရန်သမိုင်း Lego Group မှအတူတကွချပြီးအတွက်လှည့် 76178 နေ့စဉ် Bugle?
ဇွန် ၁ ရက် - မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ VIP အသင်း ၀ င်လျှင်ဖွင့်တဲ့အခါ - 76178 နေ့စဉ် Bugle 76042 SHIELD Helicarrier ကိုကျော်တက်လိမ့်မည် Lego Marvel ယနေ့အထိမော်ဒယ်။ ယင်း၏ဒီဇိုင်နာ Mark Stafford ကဤကြောင်းဝန်ခံအတူ Lego set ကိုအိပ်မက်မက်ပါ သူ့အတွက်တော့ web slinger ရဲ့နှစ်ရှည်လများသမိုင်းကိုရည်ညွှန်းချက်အချို့ရှိပါသလား။
အနိမ့်အမြင့် ၂၅ ခု၊ အမြင့် ၈၂ စင်တီမီတာနှင့် ၃,၇၇၂ အပိုင်းအစများဖြင့်အနည်းဆုံးအီစတာဥများနှင့်မှုတ်သွင်းခံဒီဇိုင်းအချက်များပါဝင်သည်။ 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဒါဒီမှာဒီမှာ set ကိုရည်ညွှန်းပုံရသည်အရာအားလုံးပါပဲ။
ဒါဟာလုပ်ပိုင်ခွင့်မဟုတ်ဘူး Lego Spider-Man အနည်းဆုံး p မပါဘဲသတ်မှတ်ထားသည်art အဆိုပါသူရဲကောင်းရဲ့ရုပ်ပြစာအုပ်သမိုင်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 76178 နေ့စဉ် Bugle ဒါကိုလုပ်ပေးတယ်artမျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်ဆုံး p တစ်ခုထဲပါသော sartတည်ဆောက်မှု၏။ အဆောက်အအုံရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာထိုင်နေတဲ့screensရာမဖန်သားပြင်တွေမှာပရိသတ်တွေတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်အီစတာကြက်ဥအတော်များများပါ ၀ င်ပါတယ်။ ထိုကြေငြာချက်များတွင်ဤကြေငြာချက်တွင်ပါ ၀ င်သော Reka Scarlet Spider ကဲ့သို့ Ben Reilly ကဲ့သို့ပျံ့နှံ့နေသော Spider-copy များပါ ၀ င်သည့်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများ၏ရည်ညွှန်းချက်ပါရှိသည်။
အဆောက်အအုံရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာလူများစွာအတွက်အကျွမ်းတ ၀ င်လေးဘီးပါ Marvel ဝါသနာရှင်များ။ Spider-Mobile ကို Corona Motors က Amazing မှာဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါ Spider-Man နံပါတ် ၁၃၀ သည်ဘီးပေါ်တွင်ကြော်ငြာတစ်ခုအနေနှင့် ၀ က်ဘလန်းသည်ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
အချို့သူများကဒုတိယထပ်တွင်သတင်းစာမျက်နှာဖုံးကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည် သတင်းကဏ္ဍ ဆမ် Raimi ရဲ့ထံမှအဆောက်အ ဦး ၏ Spider-Man ၂။ စူပါဟီးရိုးဝတ်စုံ၏ထူးခြားသောပုံရိပ်သည်လမ်းကြား၏အမှိုက်ပုံးထဲမှဆွဲထားသည်မှာအမှန်မှာ Amazing မှဖြစ်သည် Spider-Man # 50 - ရုပ်ပြ၏ဒုတိယပြေးရည်ညွှန်းချက်။
အမှုအရာများကိုစတင်ရန်၊ နေ့စဉ် Bugle ပြcoversနာအများစုသည် ၂၀၀၂ နှင့် ၂၀၀၄ မှတိုက်ရိုက်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသင့်သည်။ Spider-Man 'Times scare'၊ 'ဓာတ်ပုံများအတွက်ဆုပေးသည့်' ဆုများအပါအဝင်ရုပ်ရှင်များ Spider-Man'' ဘယ်သူလဲ ' Spider-Man'' 'Doc Ock' မှာကြီးမားနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှနောက်တစ်ခုသည် ၄၈၅၅ အဟောင်းများကိုတပ်ဆင်ထားသောကြွေပြားကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည် Spider-Manအပေါ်အခြေခံခဲ့သည့်ရထားကယ်ဆယ်ရေး Spider-Man 2.
Green Goblin ၏ Daily Bugle အားတိုက်ခိုက်မှုသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်ရုပ်ရှင်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Spider-Man။ နောက်ဆုံးတွင် Peter Parker ၏ရုံးမှဖျက်ဆီးခြင်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ။
Daily Bugle ၏ lob ည့်ခန်း၌နောက်ထပ်တီဗွီဖန်သားပြင်တစ်ခုကရုတ်တရက်ကြက်သွန်ဖြူရှားပါးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ Morbius ၏ဤနေရာတွင်ပါဝင်မှုသည်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်နိုင်သည် Spider-ManWeb Animation Series သည် Blade နှင့်တွဲဖက်ထားသည့် Blade နှင့်အခြားသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကြက်သွန်ဖြူသည်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်မုဆိုးအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနယူးယောက်၌၎င်းအားလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။
၏အလုံးစုံဒီဇိုင်း 76178 နေ့စဉ် Bugle သူ့ဟာသူသည်မတူညီသောအရင်းအမြစ်များမှလာသည်။ Spidey # 1 မှမီးခိုးရောင်နှင့်အစိတ်အပိုင်းပြတင်းပေါက်ပုံစံသည်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိနိမိတ်မတိုင်မီအုတ်၏အလွှာကိုလည်းပြသနိုင်သည်။ ဒုတိယဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရန်သင်ဖတ်ရှုရန်လိုလိမ့်မည်။
လမ်းမပိုကောင်းပါart တစ် ဦး နှင့်အတူထက်ဤအပိုင်းကို classic Spider-Man မှတ်မိ။ Peter Parker ၏ရုံးခန်းသည်ပုံတစ်ပုံပါရှိသည် Spider-Man မြို့ရိုးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ကြ။ သတင်းထောက်ကဘာကြောင့်သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပိုပြီးသိသာထင်ရှားအောင်လုပ်ချင်ရတာလဲဆိုတာမသေချာပေမဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့အခန်းတစ်ခန်းလုံးကအီစတာဥကြီးတစ်လုံးပါ။ ဒီ particular meme။ ပျောက်ဆုံးနေသောအားလုံးသည်ထိုင်ခုံ၏အစွန်းဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာတော့အံ့သြစရာကဒီအစုမှာသူရဲကောင်းကိုအခြေခံထားတဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Insomniac's ကိုရည်ညွှန်းချက်အနည်းငယ်လောက်ပါရှိပါတယ်။ Spider-Man PlayStation 4. အတွက်အထင်ရှားဆုံးမှာtoရာမကွေးကောက်မျက်နှာပြင်တွင်နှစ်ချက်နှိပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်လွှင့်သည့်ခေါင်းစဉ်မှာဂျေယောနဂျိမ်းဆန်နှင့်အတူဖြစ်ရပ်မှန်များသာလျှင်အယ်ဒီတာသည်သတင်းစာမှအနားယူပြီးနောက်ဂိမ်းအတွက်အထူးဖန်တီးထားသောအင်တာနက်ပြပွဲဖြစ်သည်။
အခြားမျက်နှာပြင်တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းအတွင်းကြံစည်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Mayor အတွက်နော်မန်အော့စဘန်၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ကြော်ငြာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် PlayStation ကိုကိုးကား Spider-Man အဆောက်အ ဦး ရဲ့ထိပ်မှာအနီရောင်ဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အ ဦး ၏ကြားမှာအမည်းရောင်ဖြူသို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ရှိသည်။ သို့သော်ထိုဂိမ်းသည်အနီရောင်နှင့်ပါဝင်ပြီးညဘက်တွင်သတင်း၏သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာအနီရောင်နဲ့အခြားနိမိတ်လက္ခဏာအနည်းငယ်ပြထားပေမယ့်ငါတို့ကဒီဂိမ်းအတွက်အခြားတစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်။
သတင်းစာစင်တာတွင် Wilson Fisk (သို့မဟုတ် Kingpin) ပိုစတာကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည့်ဂုဏ်အသရေရှိသောဖော်ပြချက်များနှင့် Betty Brant ၏ရုံးခန်းရှိအက်ဒီဘရက်ခ်မှလွဲချော်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရှိသည်။ သူ၏သင်္ကေတဆက်ဆံရေးသည်ကောင်းစွာဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Lego Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle VIP များနှင့်အခြားသူများအတွက်မေလ ၂၆ ရက်တွင်ရနိုင်သည်artဇွန်လ ၁ ရက် ing ။ ထိုအလုပ်ကိုသင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO တွင်ထူးခြားသော ၆၀ စာရင်းရှိသည် Marvel 76178 Daily Bugle များအတွက် minifigures
သတင်းကောင်း: LEGO Harry Potter ၇၆၃၈၉ Hogwarts ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကနောက်ကျသည်မဟုတ် →